FAQ - Ozinina fanafody Changzhou
Orinasa ve ianao na orinasa mpivarotra?
Izahay, Changzhou Pharmaceutical Factory dia mpanamboatra izay mamokatra mihoatra ny 30 karazana API sy 120 karazana vita famolavolana.Nanomboka tamin'ny 1984, dia nankatoavinay in-16 ny fanaraha-maso ny FDA amerikana ka hatramin'izao.
Manana sampana 2 izahay: Changzhou Wuxin sy Nantong Chanyoo.Ary i Nantong Changzhou dia nankatoavin'ny USFDA, EUGMP, PMDA ary CFDA audits.
Afaka mizara ny antontan-taratasy mifandraika amin'izany ve ianao?
Eny, afaka mizara COA sy antontan-taratasy mifandraika amin'izany izahay ho an'ny mpanjifa.
Raha mila antontan-taratasy tsiambaratelo ny mpanjifa, toy ny DMF, dia azo alaina aorian'ny didy fitsarana ny ampahany misokatra DMF.
Karazana entana fandoavam-bola inona no azonao ekena?
Izany dia miankina, ary afaka miresaka araka ny tena filaharana.
Izany koa dia mila miresaka sy mifampiraharaha mifototra amin'ny tetikasa samihafa sy ny habe samihafa.
Amin'ny ankapobeny dia 1kg ny isa kely indrindra.
Eny, amin'ny ankapobeny, manolotra 20g ho santionany maimaim-poana izahay hanohanana ny mpanjifa.
Raha kely dia afaka mandefa an'habakabaka izahay;ary raha be dia be, dia handeha an-dranomasina izahay.
Ahoana no ahafahantsika mametraka baiko?
Afaka mandefa fanontaniana amin'ity mailaka ity ianao:shm@czpharma.com.Taorian'ny fanamafisana ny roa tonta dia afaka nanamarina ny baiko izahay ary niroso tamin'ny manaraka.
Ahoana no hifandraisanay aminao?
Afaka mandefa mailaka aminay ianao:shm@czpharma.com.
Na azonao atao ny miantso an-telefaona: +86 519 88821493.
Afaka manome lisitry ny mpanjifa ve ianao?
Efa niara-niasa tamina mpanjifa iraisam-pirenena maro izahay, toy ny: Novartis, Sanofi, GSK, Astrazeneca, Merck, Roche, Teva, Pfizer, Apotex, Sun Pharma.ary ect.
Inona no ifandraisanao amin'ny Changzhou Pharmaceutical Factory sy Nantong Chanyoo Pharmatech Co., Ltd.?
Nantong Chanyoo no tompon'ny orinasa Changzhou Pharmaceutical Factory.
Inona no ifandraisan'ny Changzhou Pharmaceutical Factory sy Shanghai Pharma.Vondrona?
Changzhou Pharmaceutical Factory dia iray amin'ireo orinasa indostrialy fototra an'ny Shanghai Pharma.Vondrona.
Manana taratasy fanamarinana GMP ve ianao?
Eny, manana taratasy fanamarinana GMP izahay ho an'ny Hydrochlorothiazide, Captopril ary ect.
Inona ny certificat anananao?
Ny vokatra samihafa dia manana mari-pankasitrahana samihafa, ary amin'ny ankapobeny dia manana US DMF, US DMF, CEP, WC, PMDA, EUGMP, toy ny: Rosuvastatin.
Inona avy ireo anaram-boninahitra anananao?
Manana anaram-boninahitra maherin'ny 50 izahay, toy ny: Top 100 orinasa indostrialy fanafody any Shina;Price integrity orinasa;Ny orinasam-pamokarana voatondro ho an'ny fanafody fototra;China AAA level orinasa mpampindram-bola;marika fanondranana API nasionaly tsara indrindra;Shina HI-teknolojia orinasa;Fahombiazan'ny fifanarahana ary matoky orinasa mendrika;Orinasa fampisehoana nasionaly momba ny kalitao sy ny fahamendrehana.
Ohatrinona ny isan'ny varotrao isan-taona?
Tamin'ny taona 2018, nahatratra USD88000 izahay.Ary ny tahan'ny fitomboana isan-taona dia mahatratra 5,52%.
Manana ekipa R&D ve ianao?
Eny, manana foibe R&D 2 izahay izay tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana ny API sy ny famolavolana vita.Mampiasa ny 80% amin'ny volam-barotray izahay amin'ny R&D isan-taona.Amin'izao fotoana izao, ny karazana fantsona R&D misy anay dia misy jeneraly 31, 20 APIS, 9 ANDA ary vokatra fanombanana tsy miovaova 18.
Firy ny atrikasa anananao?
Manana atrikasa 16 ho an'ny karazana vokatra rehetra izahay.
Inona ny fahaiza-manaonao isan-taona?
Mamokatra 1000+ taonina isan-taona izahay.
Inona ny sehatra ananan'ny orinasanao?
Manam-pahaizana manokana momba ny Cardiovascular, Antikanser, Antipyretic analgesic, Vitamina, Antibiôtika ary fitsaboana ara-pahasalamana izahay, ary antsoina hoe: "Specialist Cardio-Cerebrovascular".